Home Flash News — janadristi
Category: Home Flash News
Sunday, May 15th, 2022, Janadristi , No Comments,
३१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको ह्वात्तै बढाएको छ । वाणिज्य सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेय नेतृत्वको आयल निगम सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो । अब पेट्रोलको खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर १७० रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य १५३ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएको छ …पूरा पढ्नुहोस्
सिमरा : बाराको जीतपुर-सिमरा उपमहानगर पालिकामा मतगणना जारी छ। हालसम्म उक्त नगरको वडा नम्बर १, २२, २३, २४ को मतगणना सकिइसकेको छ। जीतपुर-सिमरा उपमहानगरको मेयर पदमा माओवादीका राजन पौडेलले लिड गरिरहेका छन्। उनले हालसम्म ३ हजार ८५९ मत प्राप्त गरेका छन्। उनलाई पछ्याउँदै एमालेतर्फकी सरस्वती चौधरीले ३ हजार ५५ मत प्राप्त गरेकी छन्। साथै हालसम्म लोसपाका सञ्जयकुमार …पूरा पढ्नुहोस्
१ जेठ, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले न्यु बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न स्थापना हुने कम्पनीमा वैदेशिक लगानीका लागि स्वीकृति पाएको छ । भारत सरकारले प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि भारतमा स्थापना हुने बुटवल–गोरखपुर क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ । न्यू बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत …पूरा पढ्नुहोस्
१ जेठ, चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट मेयर उम्मेदवार विजय सुवेदीले रेनु दाहालसँगको मतान्तरलाई घटाउँदै लगेका छन् । वडा नम्बर २ को मतगणना जारी रहेको बेला दाहाल र सुवेदीबीचको मतान्तर कम हुँदै गएको छ । वडा नम्बर १ बाट १२१ को अग्रतासहित वडा नम्बर २ आएकी दाहाल र सुवेदीबीचको मतान्तर घटेर ७४ मा …पूरा पढ्नुहोस्
काठमाडौं : सहकारीलाई सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन गर्न सकस परेको छ। तरलता अभाव भएसँगै ब्याजदरको सीमाभित्र रहेर कर्जा प्रवाह गर्न सकस परेको हो। सरकारले फागुन १४ देखि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर (कर्जा प्रवाहमा अधिकतम सीमा) १६ प्रतिशत तोकेको छ। तरलता समस्या संकटकै रूपमा देखा परेपछि सहकारीले कर्जा प्रवाह रोकेका हुन्। नवकान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका शाखा प्रबन्धक …पूरा पढ्नुहोस्
१ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेदवार बालेन साहले २६०१ मत पाएका छन् । आइतबार राष्ट्रियसभा गृहमा भइरहेको मतगणनामा उनले दोस्रो स्थानमा रहेका नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितले भन्दा करिब १२ सय मत बढी पाएका छन् । स्थापितले १४१५ र नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार सिर्जना सिंहले १३५९ मत पाएकी छन् । हाल काठमाडौं महानगरपालिकाको …पूरा पढ्नुहोस्
Wednesday, May 11th, 2022, Janadristi , No Comments,
गोरखा : गण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ को तोमनडाँडा आधारभूत विद्यालय मतदात केन्द्रमा आयोजित बैठकमा सहभागी हुन गएका कांग्रेसका प्रतिनिधि हतियारसहित पक्राउ परेका छन्। मतदान अधिकृतले आह्वान गरेको मतदात केन्द्रस्तरीय सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित कांग्रेसका प्रतिनिधि मनोज गुरुङ पक्राउ परेका हुन्। उनले बोकेको झोलाबाट प्रहरीले खुकुरी बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी केदार खनालले बताए। उनी नेपाली …पूरा पढ्नुहोस्
काठमाडौं : ‘पहिला पहिला निर्वाचन आयोगले मत दिने स्थानहरुमै टोली खटाएर मतदाता शिक्षा दिने गर्थ्यो? यसपटक त्यस्तो टोली आउँदैन?’ आयोगको कान्तिपथस्थित कार्यालयमा सञ्चालित पैसा नलाग्ने कल सेन्टर-११०२ मा अहिले दैनिक यस प्रकारका धेरै जिज्ञाशा आउने गरेका छन्। यसपटक आयोगले कम खर्च र स्मार्टरुपमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कारण स्थानीय तहमा यसका लागि घरदैलोमा टोली पठाएको …पूरा पढ्नुहोस्
२८ वैशाख, काठमाडौं । मुलुक ७५३ स्थानीय सरकारको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको प्रतीक्षामा छ । अहिले देशभरका मतदाता आफ्नो नजिकको सरकार चयनका लागि मत व्यक्त गर्ने तयारीमा छन् । चुनाव भन्नेवित्तिकै चुन्ने र चुनिने विषयमा मात्र सीमित छैन । यो अत्यधिक पैसा खर्च हुने कार्यक्रम पनि हो । चुनावको …पूरा पढ्नुहोस्
काठमाडौं : अब बैंकहरुमा पनि साताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै शनिबार र आईतबार साप्ताहिक बिदा दिने घोषणा गरेको हो। सरकारले जेठ १ गतेदेखि सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेसँगै राष्ट्र बैंकले पनि कार्यालय खुल्ने समय संशोधन गरेको हो। आगामी जेठ १ गतेदेखि लागू …पूरा पढ्नुहोस्
Tuesday, May 10th, 2022, Janadristi , No Comments,
आचारसंहिता उल्लघंन गरे १२ घण्टे स्पष्टीकरण
काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले मौन अवधिमा आचारसंहिता उल्लघंन गरेको पाइए कारबाही गर्ने भएको छ। यसअघि आचारसंहिता उल्लघंन गर्नेलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्दै आएकोमा आयोगले मौन अवधिमा १२ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने भएको हो। मंगलबार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारवाही गरिने बताए। कडा कारवाहीस्वरुप स्पष्टीकरणलाई १२ घण्टामा झारिएको उनले …पूरा पढ्नुहोस्
२७ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसले संसद विघटन गर्दा सदर गरेको र एमालेले गर्दा बदर गरेको टिप्पणी गरेका छन् । मंगलबार एमालेले काठमाडौंमा आयोजना गरेको आमसभामा बोल्दै उनले कांग्रेसले भंग गर्दा संवैधानिक भनिएको तर एमालेले भंग गर्दा अवैधानिक भनिएको टिप्पणी गरे । ‘कांग्रेसले भंग गर्दा सदर हुन्छ, एमालेले …पूरा पढ्नुहोस्
Monday, May 9th, 2022, Janadristi , No Comments,
चार म्यादी प्रहरीको मृत्यु, एक जनाले गरिन् आत्महत्या
आचरण विपरीत काम गरेको भन्दै ४८ जना बर्खास्त २६ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षाका लागि भर्ना गरिएका पाँच जना म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएको छ । एक जनाले आत्महत्या गरेकी छन् । ड्युटीमा खटिएकाहरुमध्ये काठमाडौं, हुम्ला, सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोटमा एक-एक जना म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णु कुमार केसीले जानकारी दिए । …पूरा पढ्नुहोस्
मतदानको दिन पास बोकेका सवारी साधन मात्र गुडाउन पाइने, पत्रकारलाई कोटा
२६ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनको मतदानको दिन वैशाख ३० गते सवारी अनुमति पत्र बाेकेका गाडीहरु मात्र गुड्न पाउने भएका छन् । पत्रकारहरुले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमका लागि छुट्याइएको कोटाको आधारमा सवारी अनुमति पत्र (पास) पाउने छन् । मतदानको दिन मतदातालाई सवारी साधन प्रयोग गरी ओसारपसार गर्न पाइँदैन । तर निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट …पूरा पढ्नुहोस्
क्षतिपूर्तिसहितको न्याय कार्यान्वयन गर्न न्यायपालिका प्रयासरत छ : कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश
स्वचालित पेसी व्यवस्थापन पद्दति लागू गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर निर्माणको तयारी काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको संवैधानिक सुनिश्चितताको विषयलाई कार्यान्वयन गर्न प्रयासरत रहेको बताएका छन् । सोमबार कानून दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले क्षतिपूर्तिसहितको न्याय व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न‍ न्यायपालिका हर तरहले प्रयासरत रहेको बताएका हुन् । उनले न्यायपालिकामा …पूरा पढ्नुहोस्
सत्तारुढ निकट ५ पत्रकार संगठनलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण
२६ वैशाख, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ दल निकटका पाँच पत्रकार संगठनका अध्यक्षहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोपमा आयोगले उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । आयोगले नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष विष्णु सापकोटा, समाजवादी प्रेस संगठन नेपालका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठ, प्रेस मञ्च नेपालका अध्यक्ष केशव अर्याल र प्रगतिशील …पूरा पढ्नुहोस्
गृहपालिकामै शीर्ष नेतालाई चुनौती
मतदाता रिझाउन देश दौडाहा प्रमुख दलका शीर्ष नेता नै हुन् देशको बागडोर सम्हाल्ने। उनीहरू मतदाता रिझाउन यति बेला देश दौडाहामा छन्। तर, स्थानीय तहमा आफ्ना उम्मेदवार जिताउन गृहनगरमै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई, रामचन्द्र पौडेल, राजेन्द्र लिङदेनलगायत नेतालाई गृहनगरमै सकस छ। गन्यापधुरामा कांग्रेसलाई कठिन …पूरा पढ्नुहोस्
Sunday, May 8th, 2022, Janadristi , No Comments,
चोरीका ल्यापटप, क्यामेरा तथा मोवाइल सहित २ जना पक्राउ
२५ बैशाख, काठमाडौंका बिभिन्न स्थानबाट ल्यापटप, क्यामेरा तथा मोबाइल लगायतका विद्युतीय सामग्रीहरु चोरी गरेको अभियोगमा २ जनालाई तारकेश्वर नगरपालिका-४ पुरानोगुहेश्वरीबाट बुधबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा तारकेश्वर नगरपालिका-४ पुरानोगुहेश्वरी बस्ने ३० वर्षीय सुर्य पुतुवार र तारकेश्वर नगरपालिका-४ सानोपुल बस्ने धादिङ गंगाजमुना गाउँपालिका-३ घर भएका १८ वर्षीय किशोर रहेका छन् । …पूरा पढ्नुहोस्
गठबन्धनका नाममा जनतालाई धम्क्याउन थालियो : ओली
विराटनगर : नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ५ दलीय गठबन्धनका नाममा जनतालाई धम्क्याउने काम भइरहेको बताएका छन् । एमाले मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ ले सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको विराट चोकमा शनिबार साँझ आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले चुनावका बेला मतदातालाई प्रभावमा पार्नका लागि धम्क्याउने र थर्काउने काम गरिनु आपत्तिजनक …पूरा पढ्नुहोस्
निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भए २० लाख दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
२५ वैशाख, काठमाडौँ । सरकारले निर्वाचनको सुरक्षामा खटिएको समयमा सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भए परिवारलाई २० लाख रूपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा निर्वाचन सुरक्षामा खटिने म्यादी प्रहरीसहितका सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएमा उनीहरुको आश्रित परिवारलाई २० लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरको हो । ‘निर्वाचन सुरक्षामा …पूरा पढ्नुहोस्